ကဗျာဆရာ | ပြည့်စုံ
ဘုရားပေးတဲ့ အဲဒီထူးခြားတဲ့ပါရမီ နဲ့ ကဗျာဆရာ အသက်ဆက်နေလေရဲ့....
ကိုပြည့်စုံ. ဘုရားပေးတဲ့ ပါရမီနဲ့ ကဗျာဆရာအသက်ဆက်နေလေရဲ့ ဆိုပါလား.
တခါတရံ လူ့လောကကို ငြီးငွေ့တာ လူမဆန်ဘူးဆိုတာတော့ မကြမ်းတမ်းလွန်းဘူးလား။
ဟုတ်တယ် .. ဘ၀ကို ငြီးငွေ့တာလောက် လူမဆန်တာမရှိဘူး ..